Yini i-Arduino? | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Sonke sizwile ngeProjekthi ye-Arduino kanye nemiphumela emihle yezwe le-Hardware, kepha iqiniso ukuthi bambalwa abakwazi kahle ukuthi i-Arduino iyini nokuthi yini esingayenza ngebhodi elinjalo noma ukuthi yini empeleni i-Arduino Project.
Kulezi zinsuku kulula kakhulu ukuthola ibhodi le-arduino, kepha kuzodingeka sazi futhi sibe nokunye okungaphezu kwebhodi le-Hardware elilula lapho izintambo ezimbalwa namanye ama-LED angaxhunywa khona.
1 Kuyini lokhu?
2 Igama lakho lavela kanjani?
3 Ihluke kanjani kwi-Raspberry Pi?
4 Yiziphi izinhlobo zamapuleti ezikhona?
5 Yini esiyidingayo ukuze sisebenze?
6 Amanye amaphrojekthi esingawenza nebhodi le-Arduino
Iphrojekthi ye-Arduino iyinhlangano ye-Hardware leyo ifuna ukwenziwa kwe-PCB noma ibhodi Yesekethe Ephrintiwe esiza noma imuphi umsebenzisi ukwakha nokuthuthukisa amaphrojekthi wokugcina nokusebenza kwe-elekthronikhi. Ngaleyo ndlela ipuleti I-Arduino ayilutho nje lwebhodi le-PCB esingaliphindaphinda kaningi ngendlela esifuna ngayo ngaphandle kokukhokhela ilayisense noma uncike kwinkampani ekusetshenzisweni kwayo kanye / noma ekudalweni kwayo.
Le nhlangano (i-Arduino Project) ifuna ukwakhiwa kwe-Hardware Hardware ngokuphelele, okungukuthi, noma imuphi umsebenzisi angazakhela amabhodi akhe futhi awenze asebenze ngokugcwele, okungenani asebenze njengamabhodi esingawathenga.
Le phrojekthi yazalwa ngo-2003 lapho abafundi abaningana abavela e-IVREA Institute befuna enye indlela emabhodini ane-BASIC Stamp microcontroller. La mapuleti abiza ngaphezu kwe- $ 100 ngeyunithi ngayinye, intengo ephezulu yanoma yimuphi umfundi. Ngo-2003 kuvela izinguquko zokuqala ezinomklamo wamahhala nowomphakathi kepha isilawuli sazo esingagculisi umsebenzisi wokugcina. Kuzoba ngo-2005 lapho i-Atmega168 microcontroller ifika, i-microcontroller engagcini ngokunika amandla ibhodi kodwa futhi eyenza ukwakhiwa kwayo kungabizi, okufinyelela nanamuhla amamodeli webhodi le-Arduino angabiza u- $ 5.
Igama lakho lavela kanjani?
Iphrojekthi ithola igama layo endaweni yokucima ukoma eduzane ne-IVREA Institute. Njengoba sishilo, iphrojekthi yazalwa kushisa kwalesi sikhungo esise-Italy futhi eduze kwalesi sikhungo, kukhona indawo yokucima ukoma yabafundi ebizwa ngeBar di Re Arduino noma iBar del Rey Arduino. Ukuhlonipha le ndawo, abasunguli bephrojekthi, Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino noDavid Mellis, banqume ukubiza amabhodi baphrojekthi i-Arduino.
Kusukela ngo-2005 kuze kube namuhla, i-Arduino Project ayikaze ibe nokuphikisana ngabaholi namalungelo empahla. Ngakho-ke, kunamagama ahlukahlukene anjengeGuino, okwakuwuphawu olusemthethweni lwamapuleti weProjekthi athengiswa ngaphandle kwase-United States nase-Italy.
Ihluke kanjani kwi-Raspberry Pi?
Abasebenzisi abaningi badida ibhodi le-Raspberry Pi namabhodi e-Arduino. Njengoba ama-novice amaningi kanye nabantu ongabazi kule ndaba, womabili amapuleti angabonakala efana, kepha akukho okungaba kude neqiniso. I-Arduino ibhodi le-PCB eline-microcontroller, kodwa Ayinayo iprosesa, ayikho i-GPU, ayinayo imemori yenqama futhi ayikho amachweba okuphuma njenge-microhdmi, i-wifi noma i-bluetooth lokho kusenza sikwazi ukuguqula ibhodi libe yikhompyutha encane; kodwa i-Arduino uma kuyibhodi elingahleleka ngomqondo wokuthi singalayisha uhlelo futhi i-Hardware esetshenzisiwe izosebenza lolo hlelo: kungaba into elula njengokuvula / ukucisha isibani se-LED noma into enamandla njengengxenye ye-elekthronikhi ye-3D printer.
Yiziphi izinhlobo zamapuleti ezikhona?
Amabhodi we-Arduino Project ahlukaniswe ngezigaba ezimbili, isigaba sokuqala kungaba yibhodi elilula, ibhodi le-microcontroller PCB y isigaba sesibili kungaba amahawu noma izandiso zamapuleti, amabhodi afaka ukusebenza ebhodini le-Arduino futhi ancike kulo ukuze asebenze.
Phakathi kwamamodeli webhodi le-Arduino athandwa kakhulu yilawa:
Futhi phakathi kwamamodeli wokuvikela i-Arduino athandwa kakhulu noma awusizo yile:
Isihlangu se-Arduino GSM
I-Arduino Proto Shield
I-Arduino WiFi Shield
Kokubili amapuleti nezihlangu kuyizibonelo eziyisisekelo. Ukusuka lapha sizothola ama-kits nezinsiza ezizoba nenhloso yokwenza i-Arduino ithuthukise umsebenzi ocacile njengephrojekthi yeCloneWars edala amakhithi wokuguqula ibhodi ye-Arduino MEGA ibe yiphrinta enamandla ye-3D.
Yini esiyidingayo ukuze sisebenze?
Noma kungabonakala kungenangqondo noma kuyinqaba, ukuze ibhodi le-Arduino lisebenze kahle, sizodinga izinto ezimbili: amandla nesoftware.
Okokuqala kusobala, uma sizosebenzisa into kagesi, sizodinga amandla angakhishwa emthonjeni wamandla noma ngqo kusuka kolunye ucingo lwe-elektroniki ngenxa yokufakwa kwalo kwe-usb.
Sizothola isoftware sibonga i-Arduino IDE ezosisiza ukuthi sakhe, sihlanganise futhi sihlole izinhlelo nemisebenzi esifuna ukuba ibhodi yethu yase-Arduino ibe nayo. I-Arduino IDE yisoftware yamahhala esingadlula kuyo le webhu. Noma singasebenzisa noma yiluphi olunye uhlobo lwe-IDE nesoftware, iqiniso ukuthi kuyanconywa ukusebenzisa i-Arduino IDE kusukela lapho Inokuhambisana okuphezulu nazo zonke izinhlobo ezisemthethweni ze-Arduino Project futhi izosisiza ukuthumela yonke idatha yekhodi ngaphandle kwenkinga..
Amanye amaphrojekthi esingawenza nebhodi le-Arduino
Nanka amanye amaphrojekthi esingakwazi ukuwenza ngepuleti elilula lale phrojekthi (kungakhathalekile imodeli esiyikhethayo) futhi etholakala kuwo wonke umuntu.
Igajethi edume kunazo zonke futhi leyo enikeze iphrojekthi ye-Arduino udumo olukhulu ngaphandle kokungabaza Iphrinta engu-3d, ikakhulukazi imodeli yePrusa i3. Le gajethi yokuguqula isuselwa ku-extruder nakwibhodi le-Arduino MEGA 2560.
Ngemuva kokuphumelela kwale phrojekthi, kwazalwa amaphrojekthi amabili ahambisanayo kusekelwe ku-Arduino futhi kuhlobene nokuphrinta kwe-3D. Owokuqala wabo uzoba isithwebuli sento ye-3D usebenzisa ipuleti Arduino UNO futhi eyesibili iphrojekthi esebenzisa ibhodi le-Arduino ukuze isetshenziswe kabusha futhi idale intambo entsha yamaphrinta e-3D.
Umhlaba we-IoT ungenye yezindawo noma izindawo lapho i-Arduino inenani elikhulu lamaphrojekthi. I-Arduino Yún iyimodeli ekhethwayo yale misebenzi eyenza ukukhiya kwe-elekthronikhi, izinzwa zeminwe, izinzwa zemvelo, njll. Ngamafuphi, ibhuloho phakathi kwe-Intanethi kanye ne-elekthronikhi.
Lesi isifinyezo esincane sephrojekthi ye-Arduino namabhodi e-Arduino. Isifinyezo esincane esisinikeza umbono wokuthi ayini la macwecwe, kepha njengoba sishilo, ukuqala kwawo kubuyele ku-2003 futhi kusukela lapho, amapuleti I-Arduino ibikhula hhayi kuphela ekusebenzeni noma emandleni kepha nakumaphrojekthi, izindaba, izimpikiswano namaqiniso angapheli enza i-Arduino inketho enhle kumaphrojekthi wethu we-Free Hardware noma nje kunoma iyiphi iphrojekthi ehlobene ne-Electronics.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Yini i-Arduino?